कोरोना स crisis्कट कोविड १ २०० 19 बिल गेट्स अभिनीत एमएस ब्लास्टर भाइरसको सम्झना दिलाउँछ: मार्टिन भ्रिजल्यान्ड
अधिक र अधिक ध्वनिहरू देखा पर्दैछन् कि कोरोनाभाइरस वास्तवमा प्रयोगशालामा डिजाइन गरिएको हुन सक्दछ। जहाँ म शुरू मा न्यू.एन.एल. का तथाकथित तथ्य जाँचकर्ताहरु द्वारा हमला गरिएको थियो, जब मैले देखाए कि त्यस्ता भाइरस एक प्रयोगशालाबाट आउन सक्छ, यो उही सम्भावित मिडिया अहिले सम्भावना उल्लेख छ। Skynews मे २ 24, शीर्षक: "कोरोनाभाइरस एक 'सेल संस्कृति प्रयोग' हुन सक्छ जुन गलत भयो।"
फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटीका प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोभस्कीले वैज्ञानिक अध्ययन पूरा गरेका छन् जुन हाल पीयर समीक्षा अन्तर्गत भिक्टोरियाको ला ट्रोब युनिभर्सिटीको सहकार्यमा देखा पर्दछ कि COVID-१ human लाई मानव प्रसारणको लागि अद्वितीय रूपले परिमार्जन गरिएको छ जुन कुनै पनि भन्दा बढी हो। चमत्कार सहित अन्य जनावरहरू। ”
पहिले नै सकृय छ जनवरी 28 2020मानिसहरूले बिल गेट्स के हो भनेर बुझ्नु अघि नै मैले साइटमा उल्लेख गरें कि उनले २०१ 2017 मा निम्न बयान दिएका थिए:अर्को महामारी केवल एक आतंकवादीको कम्प्युटर स्क्रिनमा हुन सक्छ जुन चेचक भाइरसको सिंथेटिक संस्करण बनाउन आनुवंशिक हेरफेर प्रयोग गर्न चाहन्छ।"
यदि तपाइँ विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक बैठक कोठा र कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणालीहरूको आपूर्तिकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि ती कम्प्युटरहरूको अपरेटिंग सिस्टमले कसरी काम गर्दछ। तपाईंलाई कम्प्युटरको कमजोरी थाहा छ र ईन्टरनेट को माध्यम बाट तपाईं यस्तो प्रणाली भेटाउन सक्नुहुन्छ क्षति ल्याउन। त्यसोभए तपाईले कम्प्युटर भाइरस मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ र समाधान प्रदान गरेर अतिरिक्त पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईं आफैले त्यसो गर्नुहुन्न किनकि त्यो नोटिस गर्न अति नै हुने छ। तपाइँ कम्पनीहरूका माध्यमबाट यो गर्नुहुन्छ जुन पूर्ण स्वतन्त्र देखिन्छ।
यस वर्षको सबैभन्दा खराब कम्प्युटर भाइरस हमलाले विश्वभरका व्यवसायहरू, सरकारी एजेन्सीहरू र घरेलु प्रयोगकर्ताहरूलाई चकित पारेको छ र माइक्रोसफ्टका अरबपति संस्थापक बिल गेट्स र उसको विन्डोज सफ्टवेयरको खिल्ली उडाउँदै छ।
उत्तर अमेरिका, एसिया र युरोपमा सयौं हजार कम्प्युटरहरू क्र्यास भइसकेका छन र इन्टरनेटमा भाइरसको नक्कल हुने क्रममा गति बढेको एक विज्ञले भने।
र उनले चेतावनी दिए कि भाइरसमा "टाइम बम" रहेको छ, जुन शनिबार विस्फोट हुनेछ।
एमएस ब्लास्टरले विन्डोज २०००, विन्डोज एक्सपी, विन्डोज एनटी र विन्डोज सर्भर २०० 2000 सबैभन्दा कमजोर हुने Microsoft बाट धेरै जसो विन्डोज प्रणालीहरूमा सफ्टवेयर बगको शोषण गर्दछ। (मुहान: smh.com.au)
त्यो २०० 2003 मा थियो र कसलाई यो भाइरस प्रकोप मा धेरै काताइएको अनुमान गर्न सजिलो छ। जोन वेंडेल थम्पसन त्यस समयमा थिए Symantec अध्यक्ष एन्टि भाइरस, कम्पनी जसले यस एमएस ब्लास्टर भाइरस विरूद्ध 'द्रुत विमोचन संरक्षण अपडेट' जारी गर्‍यो ११ अगस्त, २००। मा। माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? ठीक, उही जोन वेंडेल थम्पसन।
पक्कै पनि यसको पछाडि को छ भनेर पत्ता लगाउन तपाई अलौकिक हुनु पर्दैन।समस्या, प्रतिक्रिया समाधानखेल थकित थियो। यो सबै देखिने छ जब तपाईं आफ्नो आँखा खोल्नुहुन्छ। यो एमएस ब्लास्टर कम्प्यूटर भाइरस प्रकोप डिजाइन द्वारा पाठ्यक्रम थियो। आम जनताले एन्टि भाइरस सफ्टवेयर एन मासे खरिद गरे।
ज्ञानमा कि मानव शरीर र यसको जीनोम पूर्ण रूपमा म्याप गरिएको छ र हामी प्रयोग गर्दैछौं CRISPR-CAS टेक्नोलोजी इन्टरनेटमा डीएनए को हरेक टुक्रा प्रतिलिपि अब मानव शरीर हो, जुन २०० 2003 मा घर र अफिस कम्प्युटर थियो। कोरोनाभाइरस पछि एमएस ब्लास्टर भाइरस हो र बिल गेट्स अझै पनि मुख्य सवारी चालक हुन्। उनका पैसा बिल र मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन मार्फत एन्टी भाइरस कम्पनीहरूलाई खोप उत्पादनको रूपमा जान्छन्। यो उही खेल हो, केवल बायो कम्प्युटर स्तरमा।
कुन प्रश्नले हामीलाई यस्तो प्रश्न गराउँदछ, "तपाई सजिलैसँग अदृश्य शत्रुले जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ र उनीहरूले कुनै उपाय स्वीकार्छन्?" ठिक छ, २०० MS एमएस ब्लास्टर भाइरसको प्रकोप कम्प्यूटरहरूको लागि विनाशकारी थियो। कोविड - १ out प्रकोप मानव बायोकम्प्युटरको लागि विनाशकारी छ। आँखा खोल्ने समय भएको छैन? यस विश्वव्यापी घोटालाबाट छुटकाराको एक मात्र उपाय भनेको स्क्यामरहरूलाई फाडेर राजनीति र मिडियामा ठूला पैसाको कठपुतलीहरू उठाउनु हो। यो उठ्नेबाट सुरू हुन्छ र एउटामा जारी रहन्छ मुटुको क्रान्ति, र ठोस कार्य लिनुहोस्। कार्य लिनुहोस् र क्रान्ति अब शुरू गर्नुहोस्:
स्रोत लिङ्क सूची: skynews.com, smh.com.au, wikipedia.org
माइक्रोसफ्ट पेटन्ट २०२०-०2020०060606०XNUMX मानव मस्तिष्कलाई क्रिप्टो भुक्तान प्रणालीसँग जोड्दै
नेटफ्लिक्स 'महामारी: कसरी प्रकोप रोक्न सकिन्छ' युनिभर्सल भ्याक्सिन सुपरहमान -२.० को विज्ञापन अभियान?
ट्याग: आक्रमण, एन्टिभाइरस, बिल, ब्लास्टर, कम्प्युटर, कोरोनाभाइरस, Covid-19, विशेष, गेट्स, यूहन्ना, माइक्रसफ्ट, MS, MSBlaster, pc, सिमन्टेक, थमसन, टीका, टीकाकरण, Wendell
28 मई 2020 मा 11: 33
वाशिंगटन टाइम्सले यो अनुसन्धानमा रिपोर्ट पनि गरेको छ, कार्डहरूको यो चकाना घर हरेक दिन चुँडिन थालेको छ। केवल गरिएको क्षति अपूरणीय छ ..
28 मई 2020 मा 11: 40
गेट्स अस्पृश्यको हो र सामान्य संदिग्धहरु द्वारा उच्च स्तरमा सुरक्षित गरिएको छ।
बिल गेट्स मानद नाइट बन्छन्
त्यसले पनि इरल्याण्डको पूर्ण सहयोगलाई यस चकमा पिरब्राइट इन्स्टिच्युट मार्फत वर्णन गर्दछ।
30 मई 2020 मा 00: 53
हुनसक्छ यो मात्र सही छ कि गरिएको क्षति अपूरणीय छ। यदि यसलाई मर्मत गर्न सकिन्छ, हामी केवल हामी पहिले नै भएकोमा फर्कनेछौं। यदि यो सम्भव छैन भने, तब हामीले केहि नयाँ निर्माण गर्नु पर्छ ... ..
अचम्मको कुरा, यो सबैभन्दा ठूलो "संकट" सम्भवतः पूर्ण रूपले उन्मूलन नगरीकन बिभिन्न चीजहरू गर्ने सब भन्दा ठूलो मौका हो।
तर यो अझै पनि एक चीज हुनेछ…।
28 मई 2020 मा 13: 39
अब तिनीहरू व्यस्त छन् ...
सोरोस द्वारा अनुदान प्राप्त समूह भन्छन् कोभिड १ C को संकट 'परिवारलाई समाप्त गर्न' एकदम सही समय हो
एमएस एनबीसी (एमएस = माइक्रोसफ्ट)
28 मई 2020 मा 15: 36
यो सबै लिपि अनुसार हुन्छ
प्रमुख खोप कम्पनी WHISLEBLOWER भन्छन कि नयाँ RNA #COVID खोप उनको कम्पनीले विकास गरिरहेको छ 97%% महिलामा स्थिरता पैदा गर्न सक्दछ, र यो प्राप्त गर्ने १००% को डीएनए पनि परिवर्तन गर्दछ।
28 मई 2020 मा 15: 39
28 मई 2020 मा 16: 59
अरबपतिहरूले विश्वको जनसंख्या संकुचन गर्न खोज्छन्, रिपोर्ट भन्छ
रोबर्ट फ्रैंक द्वारा
मे २,, २०० 26 ११::2009 बिहान ईटी
29 मई 2020 मा 09: 00
@ अनालेज: भिडियो कतै भेट्टाउन सकिन्छ?
29 मई 2020 मा 16: 37
यसमा फिर्ता आउनुहोस् जेड फिनिक्स जस्तै बटर, मिकोविट्स, काउफम्यान सामान्य संदिग्ध हुन् र यसलाई आइके, जोन्स, एलेन नेटवर्कले समर्थन गरेको छ।
28 मई 2020 मा 15: 49
विगतमा, सेल्ट्स, ए Anglo्ग्लो-स्याक्सनहरूले धेरै समयमै वास्तविक इ ruled्ल्याण्डमा शासन गरे। अब तपाईंसँग अर्को 'एलीट' छ
जसले मेक-अप अ English्ग्रेजी थर र मेक-अप एररक्रेसीका साथ उक्त स्थान लिए। तपाईले यो संसार भरि देख्नु भयो, त्यो आप्रवासी 'कुलीन'।
30 मई 2020 मा 06: 40
सहि, प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको "पुरानो सामान्य" ले हामीलाई यस्तो अवस्थामा राखेको छ, त्यसैले यो नयाँ सामान्यको लागि समय हो। तसर्थ नयाँ सामान्यलाई अब टाढाबाट बाहिर निकालिंदैन, तर प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप शासन प्रणाली। त्यसैले समय http://www.fvvd.nl र भेट्नुहोस् र याचिकामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्
30 मई 2020 मा 12: 22
हो 'हामीले' हाम्रा 'चिकित्सकहरूलाई' राम्रो 'कामका लागि धन्यवाद दिनुपर्दछ।
मानिसहरूले याचिकामा हस्ताक्षर गर्छन्, अब।
30 मई 2020 मा 18: 41
र यहाँ समाचार छ कि दंगा सामान्य संदिग्धहरु द्वारा उत्तेजित गरिएको छ। सर जर्ज फ्लोड एक मेसोनिक स्ट्यान्ड पोजमा। स्पष्ट रूपमा उनी पुलिस अफिसरलाई चिन्थे, किनकि तिनीहरूले सँगै सुरक्षा गरे। फ्याट गलत झण्डा यस्तो देखिन्छ, केहि चलचित्रहरू जुन यो उचित रूपमा देखाउँदछ। अरू मध्ये 33 XNUMX औं सडकको रंग आदि।
« परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ
मिनियापोलिस जर्ज फ्लोड पुलिस हत्या गर्ने तरिका गृहयुद्ध जारी गर्ने? »
कुल भ्रमण: 4.174.114